सरकारलाई ओलीको प्रश्न: २४ लाख डोज खोप खोइ? – Health Post Nepal
सरकारलाई ओलीको प्रश्न: २४ लाख डोज खोप खोइ?
२०७८ माघ ९ गते १३:५१
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हराइरहेका २४ लाख डोज कोरोना खोपबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले २४ लाख डोज कोरोना खोप कता हराएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका हुन्।
‘२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेका छन्,’ उनले भनेका छन्,‘कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप? कसले लुकायो वा बेच्यो? यसका लागि को जिम्मेवार छ?’
ओलीले वर्तमान सरकार महामारीको नयाँ लहरमा गैरजिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको आरोप लगाएका छन्। सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकारको गैरजिम्मेवारपन प्रष्ट भएको उनले बताएका छन्।
‘एकातिर ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको छ भने अर्कातिर भण्डारमा भएका खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौं नागरिकहरू खोपबाट बञ्चित छन्,’ ओलीले भनेका छन्,‘अरू त अरू, खोप लगाउन आवश्यक सिरिन्ज र अत्यन्त आधारभूत मानिएको औषधि सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।’
सरकारले अकारण स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटसमेत कटौति गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको उनले आरोप लगाएका छन्।
तत्कालीन सरकारले स्थानीय तहमा ३९६ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न विनियोजन गरेको बजेट कटौति गरिएकोप्रति ओलीको आपत्ति छ।
यसका साथै सरकार कोभिड पीडित बिरामीको उपचारका लागि खरिद गरिएको आइसियू, एचिडयू तथा भेन्टिलेटरको भुक्तानीबाट भागेर आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने दायित्वबाट बिमुख हुँदै गएको उनले दाबी गरेका छन्।